EJacs - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguInge
Indlela yokuhamba engaselunxwemeni kunye nolwandle zihamba ngaphaya kwendlela kwaye zibonakala ukusuka eflethini. Iivenkile zokutyela/iikhefi/iibhari kulula ukuhamba ngeenyawo okanye ngebhayisekile kwiindlela eziya kwiPenguin Island. Indawo yokupaka imoto iseyadini. Izithuthi zikawonke-wonke ziyafikeleleka lula. Indawo yam ilungele abantu abathandanayo, abahamba ngezoshishino nabahamba bodwa abafuna indawo yokuhlala ekufutshane nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa kwindawo yaseRockingham. Isiqithi seGarden siyabonakala ukusuka eflethini.
Le yindawo enegumbi lokuhlambela nelokuhlala/ikhitshi elincinci. Ineendawo ezintle zokujonga i-Rockingham foreshore kanye emnyango. Ithivi kunye ne-DVD kwindawo yokuhlala. Indawo engaphandle yindawo encinci yabucala enendawo eyaneleyo yokugcina iibhayisekile okanye ii-kayak. I-wifi yasimahla iyafumaneka.
4.82 · Izimvo eziyi-191
Unxweme lungaphambili ibe luza kungena ngaphaya kwendlela. Iivenkile zokutyela ezingaselwandle ezifana neRustico zikufutshane ngemizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo kwiindlela ezintle. Ivenkile yokutya yasekuhlaleni imizuzu eyi-15 xa uhamba okanye imizuzu eyi-5 ngemoto. Ukukhwela elwandle kuyacetyiswa njengoko ilunxweme oluhle.
Umbuki zindwendwe ngu- Inge
Ndifumaneka ukuze ndincedise ekwenzeni ukuhlala kwabo kube mnandi ngakumbi kwaye ndingaqhagamshelana nawe ngefowuni iiyure ezininzi ngaphandle ko-9pm kungekhona ngaphambi ko-7am.